စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား: ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း မွေးနေ့ အမှတ်တရ
ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း မွေးနေ့ အမှတ်တရ
“ကားပျက်၍ ခြေလျင် လျှောက်ခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်”
ဗိုလ်ချူပ်ရဲ့  ကိုယ်ရေးအရာရှိ (PA) တစ်ဦး ဖြစ်သူ တက္ကသိုလ် နေ၀င်း ရေးသားထားတဲ့ “ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းနှင့် လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု မှတ်တမ်း” စာအုပ်မှ အတုယူ လေးစားဖွယ် ဗိုလ်ချူပ်ရဲ့  စိတ်ဓါတ်ကို ထုတ်နှုတ် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ယခုလာမဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၃) ရက်နေ့ဟာ ကျွန်တော်တို့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့  မွေးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရအောင် စွမ်းစွမ်းတမံ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ တပ်မတော် ဖခင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဒီဆောင်းပါးကို ကျွန်တော် ကိုဖိုးတရုတ်မှ တင်ပြလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ ဗိုလ်ချူပ်တွေနဲ့တော့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေတာကို လေ့လာသိရှိကာ အခွင့်အရေးကို ရသလောက် ရဟန်းသံဃာ ကျောင်းသား ပြည်သူတွေရဲ့  အသက်နဲ့ ဖလှယ်ပြီးတောင် မတရားရယူထားတဲ့ တပ်မတော်ကို ခုတုံးလုပ်သူ စစ်အာဏာရှင်တစ်စုကို ဖယ်ရှားကြဖို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရင်း တင်ပြ လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျား။
တနည်းအားဖြင့် ၂၆-၉-၄၆ နေ့သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာ ရရှိကာ ၀န်ကြီးများအဖွဲ့ (ကက်ဘိနက်) ခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာသည့်နေ့ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနေ့နံနက် ရန်ကုန်မြို့  အလုံလမ်းရှိ အင်္ဂလိပ် ဘုရင်ခံ အိမ်တော် (ယနေ့ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်တည်ရာ) သို့ သွား၍ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် အစိုးရ အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် တာဝန်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး ရယူပြီးနောက် ဗဟန်း၊ တာဝါလိန်းလမ်းရှိ သူ၏နေအိမ် (ယခု ဗိုလ်ချုပ် ပြတိုက်) သို့ ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း ကျွန်တော့်အား ခေါ်၍ အရေးကြီးစကား ပြောခဲ့ပါသည်။
“ဟေ့ကောင် ဒီနေ့ကစပြီး ငါဟာ အစိုးရအဖွဲ့ (ကက်ဘိနက်) ခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာပြီ၊ မင်းကလည်း ငါ့ရဲ့  ပီအေ (အပါးတော်မြဲ) အဖြစ် တစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်း တရားဝင် ပြန်တမ်းထွက်လာလိမ့်မယ်၊ ဒီတော့ ငါတို့မှာ အဆောင်ယောင် အခွင့်အရေးတွေ ရလာလိမ့်မယ်၊ အာဏာရလာတယ်ဆိုရင်ပဲ ငါတို့ကို ချဉ်းကပ် အကူအညီ တောင်းတာတွေ လာလိမ့်မယ်၊ ငါ့ရဲ့  ဆွေမျိုးတွေ၊ ငါ့မိန်းမဘက်က အမျိုးတွေ၊ ပြီးတော့ မင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေ အားလုံး ဘယ်သူ့ကိုမှ မတရား အခွင့်အရေး မပေးရဘူး၊ သူတို့ အကူအညီ တောင်းတာကို လုပ်မပေးရဘူး၊ မင်းတို့ ငါတို့ကလည်း ဘယ်သူ့ဆီကမှ ဘာအကူအညီမှ မယူရဘူး၊ အခွင့်အရေး မယူရဘူး။”
“ဘယ်သူ့ဆီကမှ အကူအညီ မယူရဘူး၊ အခွင့်အရေး မယူရဘူး” ဟူသော ဗိုလ်ချုပ်စကား၏ အဆုံးသတ်ပုံကို ကျွန်တော်သည် ယနေ့အထိ မမေ့နိုင်ပါ။ မမေ့နိုင်အောင်လည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် သူအမိန့်ပေး ညွှန်ကြားသလို သူကိုယ်တိုင်လည်း လိုက်နာ ကျင့်သုံးခဲ့ကြောင်း ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။
ကြုံတွေ့ခဲ့ရပုံမှာ ဤသို့ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်က “ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ကောင်စီ” ဟုခေါ်သော အစိုးရအဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၀န်ကြီးအဖြစ် စီးခဲ့သည့် မော်တော်ယာဉ်မှာ အင်္ဂလန်ပြည်လုပ် “၀ူစလီ” အမျိုးအစား အနက်ရောင် ဆလွန်းကား အမှတ် RA/2874 ဖြစ်ပါသည်။
“ဟေ.. ဟုတ်လား၊ မင်း သေသေချာချာ လုပ်ကြည့်ပြီးပြီလား” ကျွန်တော်က ဤသို့ ပြန်မေးရခြင်းမှာ ရဲဘော် ကျော်စိန်သည် ကားမောင်းတတ်ရုံမက စက်ပြင်ပညာပါ အသင့်အတင့် တတ်ထားသူ ဖြစ်၍ မေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
“ဟုတ်ကဲ့ လုံးဝ စက်နှိုးလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်၊ ရုံးမှာလည်း ဗိုလ်ချုပ်ခေါ်ထားတဲ့ အစည်းအဝေးက (၁၀) နာရီ စဖို့ ရှိနေတယ်၊ အခု (၉) နာရီခွဲ ကျော်နေပြီ၊ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ရုံးကို အချိန်မှီ သွားနိုင်အောင် တယောက်ယောက်စီက မော်တော်ကားတစ်စီး ဖုန်းဆက်တောင်းလိုက်မယ်။” ပြောပြောဆိုဆို ကျွန်တော်သည် အိမ်ပေါ်ထပ် တက်သည့် လှေကားရင်းရှိ တယ်လီဖုန်းဆီကို လျှောက်သွားစဉ် ဗိုလ်ချုပ်က လှမ်းခေါ်လိုက်ပါသည်။
“ဟုတ်ကဲ့ ဒါမှ ကျွန်တော်တို့ ရုံးကို မြန်မြန်သွားနိုင်မှာ မဟုတ်လား” ကျွန်တော်က အမှန်အတိုင်း ပြန်ပြောလိုက်ရာ ဗိုလ်ချုပ်သည် ပို၍ လေသံပြင်းစွာဖြင့် ကျွန်တော့်အား အပြစ်တင်ပါလေတော့သည်။
“မင်းက တော်တော် ညံ့သေးတာဘဲ၊ တယ်လီဖုန်း ဆက်ပြီး မော်တော်ကားတောင်းဖို့ တခုတည်းဘဲ မင်း တွေးမိတာကိုး၊ မင်းတို့ ငါတို့ အနေနဲ့ အခုနေအခါ မော်တော်ကား လှမ်းတောင်းလိုက်ရင် တစ်စီးမဟုတ်ဘဲ (၁၀) စီးလည်း ရနိုင်တယ်၊ အဲဒါ ဆက်စပ်ပြီး စဉ်းစားကြည့်မှာပေ့ါ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ ငါတုိ့ကို မော်တော်ကားပေး ကူညီတာကို အကြောင်းပြုပြီး သူတို့က ငါတို့ဆီက မတရား အခွင့်အရေးတွေ တောင်းလာမှာ ကိုတော့ မင်း မတွေးမိဘူး မဟုတ်လား၊ မင်းကို ငါ အစောကြီးကတည်းက ကြိုပြောခဲ့တယ် မဟုတ်လား၊ မင်းတို့ ငါတို့ အနေနဲ့ ဘယ်သူ့ဆီကမှ ဘာ အကူအညီမှ မယူရဘူး၊ အခု မင်းက မော်တော်ကား လှမ်းတောင်းတာ ဟာလည်း အခွင့်အရေး ယူတာဘဲ၊ ဒါကြောင့် မင်း စောစောက စိတ်ကူးသလို တယ်လီဖုန်း ဆက်ပြီး မော်တော်ကား မတောင်းရဘူး။”
“ဘာမှ လုပ်မနေနဲ့ ငါတို့ ကားပျက်နေတယ် မဟုတ်လား၊ ဒီတော့ မင်းနဲ့ငါ ရုံးကို လမ်းလျှောက်သွားကြမယ်၊ ရုံးရောက်တော့မှ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဌာနကို ဖုန်းဆက်ပြီး ငါတို့ကားကို စက်ပြင်သမားတွေ လာဆွဲယူဖို့နဲ့ ပြင်ပေးဖို့ ပြောပေါ့၊ ကဲ ပြောနေတာ ကြာတယ်ကွာ သွားကြစို့”
ုထိုကားကလေးကို မောင်းလာသူမှာ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ကို စတင်တီထွင်သူ ရုပ်ရှင်ဖခင်ကြီး လန်ဒန်အတ် ဦးအုံးမောင် ဖြစ်နေပါသည်။ ထိုအချိန်က သူသည် ဗဟန်း ၀င်္ကပါလမ်းတွင် ခေတ္တနေထိုင်ပြီး ဆူးလေ ဘုရားလမ်းရှိ သူ၏ ဓာတ်ပုံတိုက်နှင့် ရုပ်ရှင် ကုမ္ပဏီ ရှိရာသို့ ကိုယ်တိုင် ကားမောင်းသွားခြင်းဖြစ်ဟန် တူပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ကျောင်းသားဘ၀က ရုပ်ရှင်ဝါသနာ ပါသဖြင့် ရုပ်ရှင် စတူဒီယိုများသို့ ရံဖန်ရံခါ သွားရောက်လေ့လာရင်း ဦးအုံးမောင်နှင့် သိကျွမ်းနေပါသည်။
“နေစမ်းပါဦး၊ မောင်တို့ ဆရာတပည့် ဘယ်လို ဖြစ်လာတာလဲ၊ လမ်းမပေါ် ခြေကျင် လျှောက်ရသလား၊ မော်တော်ကား ကောကွယ့်” ဦးအုံးမောင်က မေးသဖြင့် ကျွန်တော်ကလည်း “ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ကား ပျက်နေလို့ စက်နှိုးမရတာနဲ့ အိမ်မှာဘဲ ထားပစ်ခဲ့ရပါတယ်” လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါသည်။
“ကျွန်တော်လည်း ဦးလေး ပြောသလိုဘဲ မော်တော်ကား တစ်စီး ဖုန်းဆက်တောင်းမလို့ဘဲ၊ ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်က မတောင်းရဘူးတဲ့၊ ဗိုလ်ချုပ်စီးဖို့ မော်တော်ကား ကူညီရတာကို အကြောင်းပြုပြီး နောက်ပိုင်းကျရင် မတရား အခွင့်အရေးတွေ တောင်းလာလိမ့်မယ်၊ စီးပွားရေးသမားတွေဟာ အဲဒီလို လုပ်တတ်တယ်လို့ ဆိုပြီး အတွင်းဝန် ရုံး ရောက်အောင် ခြေလျှင် လျှောက်ကြမယ် လို့ ပြောပါတယ်။”
ဦးအုံးမောင်သည် ဆရာ ဦးဘချို နှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးနေသော မိတ်ဆွေ ဖြစ်သည့်အပြင် ဦးဘချို ကဲ့သို့ပင် ဆံပင်ရှည် သျှောင်ထုံးနှင့် တဘက်ခေါင်းပေါင်း ပေါင်းထားသဖြင့် မြန်မာလူကြီး တစ်ဦး ပီသစွာ ခန့်ညားကာ ဥပဓိရုပ် အလွန်ကောင်းသူလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်သည် ဦးအုံးမောင်ကို ကြည့်ပြီး အားနာသွားဟန်ဖြင့် ကြိမ်းမောင်းဆူပူခြင်း မပြုတော့ဘဲ အော်စတင် ကားလေး ရပ်ထားရာသို့ လျှောက်သွားကာ ဦးအုံးမောင်အား ပြုံး၍ နှုတ်ဆက်ပါသည်။
အချိန် 3:37 AM
dammnn it! why did our general passed away so early. T_T. How many decades do we need to wait for another Man like him. dmannnnnnnnnn it.
ဗိုလ်ချုပ် ၂ကျပ်တန်းက ရုပ်ရှင်ထိုင်ကြည့်နေခဲ့ဘူးတဲ့ အကြောင်းလေးလဲ ဖတ်ဖူးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရွယ်ထိ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ နိုင်ငံရေး၊စစ်ရေး နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကလွဲလို့..ပုဂ္ဂလိကရေးရာအကြောင်း၊ ယခုလိုအဖြစ်ပျက်မျိုးမှ လေးစားဖွယ် စိတ်ထားများအကြောင်း သိပ်မသိရှိခဲ့ကြပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းရေးသားသည့်စာအုပ်အများပြားရှိသော်လည်း..အကြောင်းရာများပြန့်ကျဲနေပါ၍..ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးခံယူချက်များနဲ့ သမိုင်းများက တကဏ္ဍ။ သူ့ရဲ့ personal life အကြောင်းများက တကဏ္ဍ၊ အတုယူလေးစားဖွယ် စိတ်ထားများ..အားသာချက်၊ အားနဲချက်များ ကိုအသားပေးရေးသားသော ကဏ္ဍ စသည်ဖြင့် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ရေးသားမှတ်တမ်းတင်မှုမျိုးရှိလျှင် အလွန်သင့်တော်ကောင်းမြတ်ပေမည်ဟုထင်မိပါသည်။